परमेश्वरले प्रल्हाद थापालाई नयाँ जीवन दिनु भयो | Nepali Christians
परमेश्वरले प्रल्हाद थापालाई नयाँ जीवन दिनु भयो
July 24, 2014 1:13 pm by: Admin Category: Testimonials A+ / A-
परिवारका सदस्यहरुको आशा सबै मरिसकेको थियो । अब अन्तिम क्षण हिन्दु विधि अनुसार किरिया गर्नु बाँकी थियो। त्यसैले दुवै जना छोराहरुले हस्पिटलबाट आफ्नो वावुको अन्तिम सास आफ्नै घरमा जावोस भन्ने चाहना राखि स्टेचर सहित घरतिर लगे । साथमा डाक्टर र नर्स पनि घरसम्म छाड्न गए अब जम्मा ३ घण्टा समय थियो। आफ्नो घरको मुलि जन्म दिएर हुर्काउने आफ्नो प्रिय पिता अब ३ घण्टा पछि सबैलाई छाडेर जाने निश्चित थियो त्यसैले दुवै छोराहरु मनमा ढुङ्गा राखेर पनि अन्तिम तयारीमा जुटे।
तर कता कता छोरालाई आफुले केहि समय अगाडि ख्रिष्टियनहरुलाई प्रार्थनाको लागि बोलाउने गरेको कुरा संम्झेर मरिसकेको आशा लिएर खिष्टियन कहाँ प्रार्थना गर्न अनुरोध गर्न पुगे। विश्वास त कतै थिएन तर बाचा थियो र त्यहि बाचाको डर थियो कतै प्रार्थना गर्न नबोलाए पछि केहि हुने पो हो कि । छोराको अनुरोधमा नजिक भएका केहि खिष्टियन दाजुभाइहरु आएर प्रार्थना गर्न थाले तोकिएको ३ घण्टा समय पछि उनको शरीरको अन्तिम क्षण हुनुपर्ने थियो, उनको आँखा सधैँको लागि बन्द हुनुपर्ने थियो तर त्यसको ठीक उल्टो भयो । ३ घण्टा अगाडि डाक्टरले अन्तिम समय भनेर घोषणा गरेको गोदाम चौर ललितपुरका प्रल्हाद थापाले फेरि आँखा खोले । वरिपरि भएकाहरुको हर्ष सिमा रहेन, मरेको बावु फेरि जीवित भएकोमा छोराहरु आर्श्चर्य चकित भए पनि परिवारमा उमङ्ग छायो ।
यो घटना भरखरै मात्र ललितपुरको गोदामचौरमा घटेको हो । प्रल्हाद थापालाई ब्रेन हृयामरेज भएपछि उनका छोराहरुले हतार- हतार हस्पिटल पुर्याए तर हस्पिटलमा डाक्टरले अब केवल ३ घण्टा मात्र बाँच्छ भनेर ठोकुवा गरेपछि उनिहरुले आफ्नो बावुको अन्तिम सास घरैमा जावोस भनेर घर लगे । घरसम्म डाक्टर र नर्स पनि साथमा नै आए । ठुलो छोरालाई आफुले खिष्टियनहरुलाई कुनै दिन प्रार्थनाको लागि बोलाउने गरेको बाचा याद आयो र गोदामचौर नजिक भएको चर्चमा गएर प्रार्थना गर्न बोलाए । डाक्टरले तोकेको6घण्टा भित्र परमेश्वरले प्रल्हाद थापालाई नयाँ जीवन दिनु भयो । आउनुहोस यो आर्श्चर्य जनक घटनाको वास्तविक व्यक्ति प्रल्हाद र उहाँको छोराहरु तथा छरछिमेकीसंग प्रिन्सटन मिडियाले गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै स्वरुप उहाँहरुकै स्वरमा
तपाईको नाम ?
मेरो नाम प्रल्हाद थापा हो ।
तपाइको ठेगाना के हो ?
गोदामचौर गा बि स वडा नं ७, ललितपुर हो ।
तपाइको जन्म कहिले भएको हो ?
बि.स. २०१२ सालमा भएको हो ।
के धर्म मान्नुहुन्छ ?
हिन्दु धर्म मान्छु ।
तपाइ बिरामी भएर हस्पीटल जादा डाक्टरले अब निको हुन्न भनेको कुरा साचो हो ?
यो कुरा साचो हो भन्न सक्दिन किनकि म त्यसबेला म बेहोस थिए । अर्थात मेरो होस थिएन ।
को मार्फ ख्रीष्टियन हरुले तपाइलाइ प्रार्थना गर्नूभयो ?
मेरो दूइ वटा छोरा ले ख्रीष्टियनहरुलाइ बोलायो र उनिहरुले प्रार्थना गरे ।
प्रार्थना गर्ने बितिकै निको हुनुभयो त ?
क्रमै संग २,३ दिन पछि होस खुल्यो, अनि छोरालाइ के के भयो भनेर सोधे उसले विस्तारै बतायो ।
तपाईलाई प्रार्थना गरेर निको भए भन्ने विश्वास लाग्यो ?
ख्रीष्टियनहरुले प्रार्थना गरेर निको हुन्छ जस्तो लाग्यो त?
डाक्टरले तपाइलाइ बचाउन सक्दैनथ्यो रे हो ?
डाक्टरले त मलाई बचाउन सक्दिन भनेको थियो रे ।
नर्सहरुले यहि सम्म पु-याउन आएको थियो ।उहाँलाई Brain Ham rage भएको थियो । ॐ हस्पिटलबाट अक्सिजन दिएर यँहि ल्याएको थियो बिरामीलाई । अक्सिजन निकालेपछि उहाँ चाहि अचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । मुखमा पानी राखेपनि जिब्ब्रो हल्लाउन नसक्ने अवस्था थियो । चर्चको मानीसहरुले आएर प्रार्थना गर्नुभयो । र्सवप्रथम त बाहिर चेक अप गरियो तर लास्टमा एक पल्ट विस्वास गरेर हुन्छ की, प्रार्थना गरेर केहि हुन्छकी भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि ख्रीष्टियनहरुले प्रार्थना गरे । प्रार्थना गरेको २,३ घण्टा पछि आँखा हर्नु भएको थियो रे भन्ने उहाँकै घरपरिवार हुन् ।
प्रकास थापा -बिरामी को छोरा) को भनाइ
हामी ललितपुर जिल्लाको दमाइटार भन्ने ठाउँमा बस्छौ । हामि १० जना को परिवार मा बुबा सबै भन्दा जेठो हो । आमा, बुबा, २ छोरा, २ बुहारी, ४ जना नातिनातिना । बुबा आकष्मिक बिरामी हुनुभयो, पाटन हस्पिटल, बिर हस्पिटल लगायत मेडिकल कलेज देखि लिएर अन्तिममा ç हस्पिटल को आइ.सी.यु सम्म पुर्‍यायौँ। त्यँहा बाट पनि र्फकाइदियो ।
बुबाको वास्तविक रोग के हो ?
रोग त पहिला केहि पनि थिएन, बिहान उठेर चर्पि जानुभएको ८,१० मिनेट पछि टाउको पछाडि झस्केको निहुमा हो । त्यति खेर देखि अहिले सम्म को घटना हो ।
हस्पिटल लगेपछिको अवस्था कस्तो भयो ?
यहाँ बाट लग्दा बोल्दा बोल्दै राम्रै लाग्यो, काठमाण्डौ मेडिकल कलेज मा १ बजे सम्म बोल्दै हुनुहुन्थ्यो पछि ५ बजे सम्म पनि बोली राख्नु भएको थियो त्यसपछि ढाडबाट पानी निकाले पछि पिसाब फेर्छु भन्नु भयो । म त्यहिँ हुँदाहुँदै “ऐया बा” भन्नुभयो अनि त्यतिकै मा बेहोस हुनुभयो र त्यहि नै अन्तिम अवस्थामा अक्सिजन दिइयो । काठमाण्डौ कलेजमा त बिहाँन लगेदेखिनै जुनसुकै सीटिस्कयान गरिदिनु हामी पैसा खर्च गर्छौ भन्दा डाक्टरले पैसा अहिले किन खर्च गर्ने भने, डाक्टरहरुले आफैले परिक्षण गर्ने मात्र काम गरे । अन्तिममा ॐ हस्पिटल लग्यौँ र पनि आइ.सि.यु मा नै राख्नपर्ने भयो र राख्यौ । त्यहाँ बाट घर लग भने पछि हामीले घर लग्यौ । बिरामी धेरै बाँच्दैन र बाटो मा केहि भैहाले पनि केहि गर्दिन भन्ने कागत गराइ घर लग्यौँ । घरमा पनि अक्सीजन दिएरै ल्यायौँ र पछि नर्सले अक्सिजन पनि फिर्ता लगे । अनि हामीले बाहुन बोलाएर दान पनि गरिसकेका थियौ, ख्रीष्टियनहरुको सल्लामा केयरलींक भन्ने कम्पनि बाट खुट्टामा लगाउने पट्टी र औषधि ल्यायौ, औषधि पनि रोगको भन्दा भिटममिन नै बढी रहेछ । त्यहि खुवायौ र प्रार्थना गर्‍यौ त्यहि दिन देखि विश्वास पनि लाग्यो ।
बिरामीलाई हस्पिटलबाट घर ल्याउँदा उहँको शरीर कस्तो अवस्थामा थियो ?
हस्पिटलमा आइ.सि.यु मा हेर्दा पनि मेसिनले मात्र सास फेराएको भनेको थियो । मुटुमा मात्र अलि अलि ढुकढुक गरेको हो कि जस्तो थियो कतै तातो थिएन शरीर सबै चिसो थियो । त्यस्तो अवस्थामा घरसम्म ल्याएको हो ।
उहाँहरुले प्रार्थनाको लागि कति समय बिताउनु भयो ?
प्रार्थनाको लागि उहाँहरु त राति ११, १२ बजे सम्म बस्नुभयो खुट्टामा, टाउकोमा छोएर प्रार्थना गरिदिनु भयो । आज भोली पनि गरेको गरेकै हुनुहुन्छ । हिजो देखि चाँहि यहाँ नआएर घरमा नै बसेर प्रार्थना गर्नु भएको छ । हाम्रो यहाँ गोदामचौरमा एउटा मण्डली छ त्यहाँ पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन्छ र त्यहाँबाट देश विदेशमा प्रार्थनाको विषय पठाएका छन् । चर्चको मानिसहरु दिनदिनै आएर हेर्नु हुन्छ।
उहाँको त्यस्तो अबस्था पछि पुनर्जीवन पाउनु भयो यसमा तपाइलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
अब त हामी धेरै खुसी छौ । बुवा बाँच्नु भयो सबै जनाले माया मारीसकेका थियौ । आइ.सि. यु बाट निकाल्दा मैले हेर्न नसकेको मान्छे अहिले आएर ठिक हुनु भयो, हस्पिटलबाट ल्याउँदा अब १५ मिनेट पनि बाँच्दैन भनेको मान्छे अहिले ठिक हुनुहुन्छ । टाउको दुखेको पनि निको भयो र जिउ दुखेको पनि निको भयो । हिजो देखि खाना पनि खान थाल्नु भएको छ । माध्यम चाँहि औषधि हो तर निको भएको प्रार्थनाबाट नै हो।
यो घटनाले गाँउ समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ त ?
यसले त निकै प्रभाव पारेको छ वडा नं १देखि लिएर ९ नं गोदावरी सबै चकित परेका छन् यहि स्कुलको मिसहरु पनि, खिष्टियनहरुले चलाएको जडिबुटि कम्पनि चाँहि अमेरिकन, मलेसियन र जापानि तिन थरिको छ । पैसा त एकदम महङ्गो हो । महङ्गो भए पनि हामीले बुवाको जीवनको लागि पैसाको माया गरेनौँ । पैसा त १० वटा टेपको २२२० पर्छ । सबभन्दा सस्तो पनि ९८० हो ।
ठिकै छ उहाँ मृतक अबस्थामा हुनुहुन्थ्यो नि त्यो अबस्था बाटअहिले सम्म बढि पहल को बाट छ ? तपाई आफै बाट कि चर्चहरुबाट ?
पहल त चर्चबाट नै दिनु भएको हो । मैले बुवालाई बढि भएदेखि नै प्रार्थना गरिदिनु भनेको थिएँ र बुवालाई आइ.सि.यु मा लगेपछि पनि प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो ।
तपाइको परिवारमा पहिला कति जना खिष्टियन हुनुहुन्थ्यो ?
मेरो परिवारमा पहिला त कोहि पनि खिष्टियन थिएन । हामी १० जनाको परिवार छौँ । १ जना बच्चा अरु सबै ठुलै छौँ। हामी यति जना चाँहि अब विश्वास सहित ख्रिष्टमा जिउने बाचा गरेका छौँ । मलाइ विश्वास लाग्यो परमेश्वरले मेरो बुवालाई नयाँ जीवन दिनु भयो ।
तपाइले ख्रिष्टियन हुन्छौँ भनेर परिवारको सबै ख्रिष्टियन हुन्छन् त ?
मेरो बुवाले त मैले भने नाइ नै भन्नुहुन्न, हाम्रो परिवारको लागि एउटाले हुन्छ भने सबैले मान्छौ, किनकि हामी धेरै मिल्छौँ र मिलि पनि राखेका छौँ ।
परमेश्वरले प्रल्हाद थापालाई नयाँ जीवन दिनु भयो Reviewed by Admin on Jul 24 . परिवारका सदस्यहरुको आशा सबै मरिसकेको थियो । अब अन्तिम क्षण हिन्दु विधि अनुसार किरिया गर्नु बाँकी थियो। त्यसैले दुवै जना छोराहरुले हस्पिटलबाट आफ्नो वावुको अन्तिम परिवारका सदस्यहरुको आशा सबै मरिसकेको थियो । अब अन्तिम क्षण हिन्दु विधि अनुसार किरिया गर्नु बाँकी थियो। त्यसैले दुवै जना छोराहरुले हस्पिटलबाट आफ्नो वावुको अन्तिम Rating: 0
हाम्रो शिक्षा र बिश्वास के हो ?...मुक्तिको बाटो...